Mpanamboatra vokatra | Mpamatsy vokatra China
Famaritana famindrana mafana
Valopy valopy fonosana taratasy
Famantarana mivantana mivantana
Horonana taratasy mafana
Valopy feno fonosana PE
Valopy feno fonosana PP
Fironana amin'ny indostria
Poly Bubble mailer dia valopy feno padded, fantatra koa amin'ny anarana hoe mailer cushioned na kitapo bubble, dia valopy iray mitazona padding fiarovana mba hiarovana ireo entana mandritra ny fandefasana. Izy io dia namboarina avy amin'ny polyethylene nilahatra tamin'ny bubble ho fampidirana sy fanesorana vokatra mora. Ireo mpandefa tombo-kase dia manisy fantsom-pirinty ho an'ny fanokafana haingana sy haingana.
Size: 8 1/2 x 12 + 1.57 "
Hateviny: 60mic (lafiny tokana)
Tape: lakaoly miempo mafana avo lenta (novokarin'ny tena)
Fanontana: logo, kaody
Fonosana: 100 pcs / baoritra
Ny labozia dia ny kinova amin'ny taratasy fanontana. Natao hampiasaina amin'ny mpanonta inkjet sy laser izy ireo. Ny takelaka momba ny takelaka dia tonga amin'ny haben'ny taratasy nentim-paharazana 8,5 ″ x 11 ″, ary koa amin'ny fikirakirana endrika lehibe: 8.5 ″ x 14 ″, 11 ″ x 17 ″, ary 12 ″ x 18 ″.
Size: 8,5 x 11,75 “
Fitaovana: taratasy fotsy tsy misy sarotra fotsy
Labels isaky ny ravina: iray
Fanontam-pirinty: tsy misy / sary hazavana ao aoriana
Fonosana: 1000 pcs / baoritra
Ny lisitry ny fonosana mora tohina dia azo antoka ary miaro ireo antontan-taratasy izay miraikitra amin'ny ivelan'ny fonosana.
Size: 4.5 "x5.5"
Hateviny: 35mika ambany 45mic
Loko: Mena sy mainty
Pirinty: Lisitry ny fonosana voahidy
Adhesive: lakaoly miempo mafana avo lenta (novokarin-tena)
Liner: taratasy kraft fotsy
Ny valopy mora tohina faneriterena dia ampiasaina betsaka hiarovana sy hiarovana ireo antontan-taratasy izay miraikitra amin'ny ivelan'ny fonosana mandritra ny fandefasana.
Size: 235 × 175 mm
Hateviny: 20mika ambany indrindra 20mic
Loko: voasary & mainty na olon-kafa arakaraka ny takiana
Pirinty: INVOICE ENCLOSED / CUSTOMIZED
Ny mari-pamantarana mivantana mivantana dia karazana marika tsy andaniam-bola vita amin'ny fizotry ny fanontana mivantana mivantana. Amin'ity fizotrany ity dia ampiasaina ny lohany fanontana hafanana mba hampafana ny faritra manokana amin'ny taratasy mifono lamba, thermo-chromatic (na mafana). Ny tahiry mari-pamantarana mivantana mivantana dia hanova ny loko (mazàna mainty) rehefa mafana. Ny singa fanafanana miendrika litera na sary dia azo ampiasaina hamoronana sary eo amin'ilay marika. Ny labozia manokana dia azo alaina mora amin'ny toerana amin'ity fomba ity.
Size: 4 * 6 ”
Fitaovana: taratasy mafana mivantana
Hateviny: 130 gsm
Core: 1 ”na 3”
Quantity: 1000 pcs / roll
Loko: fotsy na loko hafa
Fanontana: tsotra na vita pirinty arak'izay takiana
Format: ratra (tsy voatery: ratra ao)
Fonosana: horonana / baoritra 4
Taratasy mafana (indraindray antsoina hoe horonan-taratasy fanaraha-maso) dia taratasy manify manokana izay mifono fitaovana noforonina hanovana loko rehefa iharan'ny hafanana. Ampiasaina amin'ny mpanonta mafana izy io, indrindra amin'ny fitaovana lafo vidy na maivana toa ny manampy milina, kitapom-bola sns.
Size: 3 1/8 santimetatra (mitovy amin'ny 80 * 80 mm)
Fitaovana: taratasy mafana 55gsm
Core: plastika 13mm
Halavany: 80m isaky ny horonana
Pirinty: litera mainty na manga
Fonosana: horonana / baoritra 27
Ny mailer polyolefin matanjaka dia miaro ny vokatra amin'ny hamandoana mandritra ny fandefasana azy.
Size: 6 × 9 + 1,5 "
Hateviny: 60 mm
Tsipika voaravaka: andalana 1-2 (tsy voatery)
Fanontana: Mahatratra 9 ny loko
Ny mari-pamindrana hafanana dia sombin-taratasy famindrana mafana misy adhesives hatao pirinty, mahazatra, apetaka amin'ny fitoeram-bokatra na vokatra, izay anoratana na an-tsoratra na fampahalalana momba ny vokatra na entana.
Fitaovana: taratasy famindrana hafanana
Bubble mailer dia valopy feno padded, fantatra ihany koa amin'ny hoe mailer na paosy misy kitapo na kitapo jiffy, dia valopy iray mitazona padding fiarovana mba hiarovana ireo entana mandritra ny fandefasana. Izy io dia namboarina tamin'ny taratasy kraft fotsy na volamena nilahatra tamin'ny bubble ho fampidirana sy fanesorana vokatra mora. Ireo mpandefa tombo-kase dia manisy fantsom-pirinty ho an'ny fanokafana haingana sy haingana.
Size: 6 × 9 + 1.57 "
Fitaovana: taratasy kraft volamena
Hateviny: 110 gsm
Fonosana: 250 pcs / baoritra
Ny valopy taratasy fonosana endrika tarehy dia mamela anao hizara mora foana ny antontan-taratasy amin'ny mpanjifanao nefa tsy manahy sao ho potika na hatsipy avy eo.
Size: 240 × 180 mm
Fitaovana: Taratasy mangarahara
Hateviny: 25gsm + 40gsm
Loko: Green & black na namboarina
Pirinty: DOCUMENTOS / LISTA FAMONJY / MANORATRA PRINTING
Adhesive: lakaoly miempo mafana avo lenta (Makatona)
Ny sary ampiasaina amin'ny vokatra dia aseho etsy ambany